Who are they?: လောက်ကောင်..အမှတ် (၉)
Posted by Who are They? at 1:31 PM
ရွှေဂုံတိုင်နေ ဗဟန်းအတွင်းရေးမှူး၊ ကြံ့ဖွတ်။
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာအမှန်က ဒီမှာပါ။
ရဲကျော်သူရွှေ ။ နေရပ်..၃၄(ကေ-၁)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊သာသနာ့ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ဗဟန်း။.(09-5132570)
တကယ်တော့ ၀င်းအောင်ကျော်က ရန်ကုန်တိုင်း ကြံ့ဖွတ်
အလုပ်အမှုဆောင် ပါ။ ခရိုင်အတွင်းရေးမှုး မဟုတ်ပါ။
Tint Swe Oo said...
He is From Shin Saw Pu..
Name..Thant Sin Aung..
He live in Yay Khel Set Compound..